Afọ Ọhụrụ ndị China na-eru nso na Apple chọrọ ime ya na Apple Store | Esi m mac
N'oge a na fim ahụ anyị chere na ị nweghị obi abụọ ọ bụla na Apple chọrọ ịkụda China ebe ọ bụla anyanwụ wara. Ha maara na ọ bụ nnukwu ahịa na-apụta na ha na ndi oru ruru eru ha nwere ike ichota ebe ahu, ha na enweta oke uru.
Anyị na-ekwu maka nke a n'ihi na site na Febụwarị 8 na ruo Jenụwarị 27, 2017 Afọ Ọhụrụ ndị China ga-agafe. N'okwu a, ọ bụ ihe omume nke ndị si na Cupertino chọrọ ime ememe na ọ bụghị naanị na ihe karịrị iri atọ Apple Store ọhụrụ emeghewo na mba Eshia.
Enweelarị ọtụtụ oge nke anyị gwara gị na ụfọdụ mmegharị Apple nwere nzube doro anya. Dịka ọmụmaatụ, agba ọla edo nke ngwaahịa ha na-elekwasị anya na ahịa ndị China, mana ha achọpụtala na mba ndị ọzọ Ọ bụ ihe ịga nke ọma na ụdị ndị ọzọ agbagala ịhapụ ngwaahịa ha n'ụdị yiri ya.
Ọfọn, na oge nke Chinese New Year, Apple na-aga ịzụlite noo nke banyere 90 nkeji nke ọ ga-akụziri ndị bịara ya ike ụfọdụ ekele maka ụbọchị dị otú ahụ. Enwere ike ịme nkuzi ndị a dị ka ezinụlọ ma ọ bụ n'otu n'otu yana iji gaa onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ga-edebanye aha weebụ anyị jikọtara gị.
A ga-etolite ọmụmụ ndị a, n'ezie, na Ahịa Apple Apple ma na mba anyị anyị anọghị n'azụ. Kpọmkwem, anyị ga-enwe usoro ọmụmụ ndị a, n'efu kpamkpam, na Apple Store na Madrid Puerta del Sol (Jenụwarị 29 na February 1, 5, 7 na 8), Adreesị Madrid(Jenụwarị 31 na February 6), Barcelona Passeig de Gracia (Jenụwarị 29 na 30, February 3 na 5), Storelọ Ahịa Apple na Barcelona La Maquinista (February 2 na 4) na Zaragoza Port Venice (Jenụwarị 30th).
A ga-eji nkuzi a mara na iji ngwaahịa Apple n'ụzọ nke ndị bịara ya mụtara ijide ma dezie foto na vidiyo, mepụta ihe nkiri dị mkpirikpi ma dekọọ vidiyo nke aka ha iji mepụta ekele maka Afọ Ọhụrụ ndị China na n'afọ a bụ ihe Afọ nke Anụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Store » Afọ Ọhụrụ ndị China na-eru nso Apple na-achọ ime ya na Storelọ Ahịa Apple
Dieter Zetsche na-ekwu maka ụgbọ ala Apple